FIVORIAMBEN’NY ONUDI ANY ABU DHABI : Voaasa manokana ny Filoha Andry Rajoelina
Nisokatra omaly 3 novambra tao amin’ny Emirates Palace Hôtel ao Abu Dhabi ny fihaonana antampony faha-18 ny Fikambanambe iraisam-pirenena misahana ny fampandrosoana ny indostria (Conférence général de l’Organisation des Nations-Unies pour le Développement Industriel ONUDI). 4 novembre 2019
Fihaonana izay tsy hifarana raha tsy ny 7 novambra ho avy izao. Tonga manatrika izany aty an-toerana ny Filoha malagasy Andry Rajoelina. Izy rahateo no vahiny manan-kaja nasaina manokana amin’ity fivoriana ity. Tonga manatrika izany ihany koa ny Filohan’i Niger sy ireo tompon’andraikitra maro maneran-tany mikasika ny indostria. Ny Filoha Rajoelina araka izany no « principal orateur » ary dia noraisina tamin’ny fomba manetriketrika ny fahatongavany tao amin’ny ivon-toeram-pivoriana ao amin’ny Emirates Palace Hôtel tamin’ity maraina ity. Tena nanamarika ity fihaonana antampony eto Abu Dhabi ity moa dia ny fanaovan-tsonia ny fanomezan’ny ONUDI famatsiam-bola mitentina 35 tapitrisa dolara ho an’ii Madagasikara. Ny fifanaovan-tsonia mikasika izay dia nataon’ny Minisitry ny Indostria sy ny varotra Lantosoa Rakotomalala ary natrehan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy ny tale jeneralin’ ny ONUDI, Andriamatoa Li Yong. Hatramin’ny taona 1986 izay naha mpikambana any Madagasikara tao anatin’ny ONUDI dia voalohany ary sambany eo amin’ny tantara no nahazo famatsiam-bola avy amin’ity sampan-draharaha ao anatin’ny Firenena mikambana ity i Madagasikara. Araka ny nambaran’ny minisitra Lantosoa Rakotomalala dia ny fahatokisan’ny mpamatsy vola sy ny fahareseny lahatra amin’ny praograman’asa ary ny fomba fitantanana na leadership ananan’ny filoha Andry Rajoelina no naharesy lahatra ny ONUDI. Tao aorian’ny fifanaovan-tsonia moa dia nanambara tamin’ny Filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Li Yong fa resy lahatra tanteraka izy tamin’ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filoha malagasy ny maraina. Filoha manana vina ary ohatra tsara alain-tahaka ho an’ny mpitondra sy ny tanora rehetra, indrindra ny aty amin’ny kaontinanta afrikana, araka ny nambarany. Naneho ny hafaliany ary nankahery sy nampirisika ny Filoha Andry Rajoelina ity tale jeneralin’ny ONUDI ity ary nilaza izy fa maniry mafy ny hitsidika an’i Madagasikara. Ny fahatanorana dia hery ary ianao dia mamafy tanjaka ho an’ireo mpitondra afrikana rehetra, hoy izy. Tao anatin’ny fandraisany fitenenana moa dia nanamafy ny velirano nataony tamin’ny vahoaka malagasy ny Filoha Rajoelina.
Ny fampandrosoana an’i Madagasikara dia tsy maintsy mifototra amin’ny fampandrosoana ny lafiny ara- indostria. Marihina moa fa ity vola izay natao sonia teto Abu Dhabi ity dia hamatsiana tetikasa maro toy ny orinasa madinika mpanao siramamy any Mahajanga sy Fort Dauphin, ny fanamboarana ivo-toeram-pamokarana herinaratra any Bongolava sy SAVA ary ny famatsiana herinaratra ho ana orinasa madinika sy salantsalany. Nisy ny fihaonana tamin’ireo olo-manan-kaja maro izay notanterahina teto Abu Dhabi ka anisan’ireny ny Filohan’i Niger, Mahamadou Issoufou, ny praiminisitra lefitrany ny Emirats Arabes Unis Scheick Mansour Bin Zayed Al Nahyan, ary ny minisitry ny Indostria sy ny angovo ny Emirats Arabes Unis.